JINGYE ရောစပ် Tank ဟုတ်တယ် ပစ္စည်းများသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ရောနှောများအတွက်ကွန်တိန်နာ။ လုပ်သည် တင်းကျပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများအရ, JINGYE ရောစပ်သည့်တင့်ကားရှိသည် ဖန်တီးသည်d ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်တန်ဖိုး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရောစပ်နေသောတင့်ကားs စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးနှင့် ငါတို့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံကိုစုဆောင်းခဲ့ကြသည်&ဒီဇိုင်း။ သင်လိုအပ်သည်လားများအတွက်အဖုံးထည့်ပါ လေဟာနယ်သို့မဟုတ်ဖိအား လုပ်ငန်းစဉ်, ဂျာကင်အင်္ကျီထည့်ပါ အအေးဘို့ သို့မဟုတ် အပူ, emulsify သို့မဟုတ်လူစုခွဲဘို့ရောနှောထည့်ပါ, ငါတို့အကြံပေးအဖွဲ့သင့်ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့သေချာစေရန်ဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။
JINGYE Mixing Tank သည်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
၁။ ယို၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်၊ ငါးပိ၊ နို့၊ အဖျော်ယမကာ၊ ဝိုင်၊ သောက်ရေစသည့်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း
၂။ အရေပြားဆေးကြောခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ခရင်မ်စသည့်နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊
4. အပူပေးခြင်းအမျိုးအစား: လျှပ်စစ်, ရေနွေးငွေ့;
6. Customization လိုအပ်ချက်များကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ပါ၏
၂။ ၎င်းသည်ပိုက်များနှင့်အဆို့ရှင်များမှတစ်ဆင့်အလိုအလျောက် PLC control box ဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုအလိုအလျောက်နားလည်စေရန်၊ အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်ဖောက်သည်များအတွက်အမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ Retort Sterilizing